Abanikezi Nkathalo Abadala: Abomelezi
uMbhali uJo-Anne Smetherham uyacinga okokuba kuthetha ntoni kuye ukuba nodliwando ndlebe no makhulu base Khayelitsha , eKapa, bonke ababe yinxalenye yombutho ongenguwo oka rhulumente I Grandmothers Against Poverty and Aids (GAPA), esenzela incwadi ebizwa ngokuba yi ‘ The Nevergiveups’. Le ncwadi ibalisa ngobomi babo bese ngama ntombaza amancinci kwi lali zase Mpuma Koloni, de kufike kwiminyaka yabo yobudala bengabanikezi nkathalo kwintsapho zase Khayelitsha.
Amandla obu Qabane
Xasi jonga ubunzima bobomi bomakhulu, kuphela kukubambisana nokuvelana kwabanye omakhulu be GAPA (Grand Mothers Against Aids) ebagcina bomelele. Kwaye lombutho wenza umsebenzi oncomekayo. Kube lulutho kakhulu ubamba udliwano ndlebe naba makhulu.
Kubo bonke ubunzima abathe bahlangana nabo, banokomelela ‘nomoya’ owomelezayo, ovuselelayo kubantu abafana nam, abane zinto ezinzi. Amabali abo ayomeleza, yimi zekelo yokomelela, amandla, nesimilo. Bandivusele ngokuba kuthetha ukuthini ukuba ngumntu.
Ngexesha ndibhala lemiqolo, ndamangala kwanyanzeleka ndime, ndime ngxi ndithule imizuzu embalwa, ndithathe ixesha ndivisise lomahluko ungaka omakhulu babe wubalisa. Omakhulu be GAPA bandibonisile okokuba intlupheko ingasiqhwalelisa, kodwa xa sikwazi ukugaqa, sijingxele, kodwa soda sikwazi ukubaleka siyephambili kwakhona, yinzuzo, kwinyathelo ngalinye.
uKusekwa kwe Qembu le Grandmothers Against Poverty and Aids
uAlicia Mdaka ubalisa ibali lokusekwa kwe GAPA (Grandmothers Against Poverty and Aids) nokuba ibuchukumise kanjani ubomi bakhe....more
Amabali oMakhulu – uKuphulukana namalungu oSapho kwi HIV/AIDS
uGoldie Qayiya , nomyeni wakhe uOtto, wase Khayelitsha, babengaqondi kakhulu nge ngentsholongwane ka gawulayo i-HIV. Kunjalo, yathatha ubomi babantwana babo ababini, uThumela no Vusi...more
uTenjiwe Tutu ubalisa nagamava wakhe njengo mncedisi kwixesha le ngcinezelo, ukubaleka amapolisa noku bhungca ijele....more
uGoldie Qayiya no Felicia Mfamana babalisa ngama bali abo ohlukileyo womtshato, uGoldie wayetshate umtshato awukhethelweyo, uFelicia wathwala ngulowo wayezakuba ngumyeni wakhe...more